Zvese zvakanaka zvinhu zvinouya muzvina: Tikiti rekukwira muSan Francisco - mutambo poindi - bhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | May 6, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Mushure meAmsterdam, London neNew York, iyo yechina yeguta edition yeTikiti Kukwira yave kuziviswa. Iwo akabudirira Mazuva eWonder mutambo wakateedzana ndiye akahwina asingaverengeki mibairo. Kungowanda kwakawanda kuri kuwanikwa kwekuwedzera uye mazita akamira munhevedzano. Pamusoro pemakondinendi nenyika, kune zvakare edhisheni yeguta, idzo dziri kuvandudzwa.
Mubhodhi mutambo hobby, unogona kutarisa kwenguva yakareba kune vanhu vano mbichana mbichana handina kumbotamba kana kunzwa nezvayo. Avo kune iyo inoshandiswa vanotambura nesiderodromophobia (kutya zvitima) kana kuti vakamirira pasina kuti chitima cheDB chivaendese kumutambo usiku apo mutambo wakanga uri pachirongwa. mbichana mbichana neMazuva eWonder/Asmodee nekuwedzera kwayo uye akakosha editions anogona kuwanikwa munharaunda yese yebhodhi mutambo wemhuri. Pane bhodhi remutambo wezvinenge zvese zvaunofarira pakuvaka nzira dzako. Padanho reguta, kune zvechokwadiwo "nzvimbo" dzakasiyana siyana. Yechina ikozvino yaziviswa.
KuSan Francisco muma1960
Ehe, vhiri renjanji harina kuvandudzwa mune ino edition. Iwo anozivikanwa mutambo mechanics ekuunganidza makadhi, nzira dzekuti uye matikiti anozadzika anochengetwa. Sezvo zvichiwanzo kukurumidza kufamba nemumaguta ega pane kuburikidza nenyika yese kana kondinendi, editions eguta anotamba nekukurumidza. Zvakare, ivo vanokodzera chete 2-4 vanhu. Nguva yekutamba inobva pamaminetsi gumi zvichikwira uye mutambo unokurudzirwa semazuva ese kune makore masere zvichikwira. In Tikiti rekukwira: San Francisco vatambi vava kuona zvinotaridzika seAlcatraz, iyo Golden Gate Bridge kana iyo "Painted Ladies".
Wese munhu anoedza kuisa mota dzavo makumi maviri pamepu yeguta. Kuti vaite izvi, vanotora makadhi semazuva ese kuitira kuti vavashandise kutora nzira mune inoenderana ruvara uye kuzadzisa matikiti avo. Kune dzimwe nzira, zvikepe, izvo zvisiri izvo ruvara rwejoker, zvinodiwa. Chimwe chinhu chisina kubatanidzwa mumutambo wekutanga kubva muna 20 ndiwo mataira ekurangarira. Aya anowanikwa paunobatanidza nzvimbo uye imwe yeaya mataira anoiswa pane imwe yenzvimbo idzi. Mapoinzi anopihwa pakupera kwemutambo kune akasiyana zviratidzo pane akaunganidzwa souvenir mataira. Semazuva ese, iwe unowanawo mapoinzi enzira dzakavakwa zvinoenderana nehurefu uye nematikiti akazadzikiswa.
Mutambo uyu uri kutarisirwa kuburitswa neAsmodee kuGermany muna Nyamavhuvhu.
KOSMOS 682248 BUDA - Mutambo - Mimvuri pamusoro peMiddle-earth,... * 14,57 EUR tenga
Kare May anogadzira zvese zvitsva: zvigadzirwa zvitsva kubva kuKosmos Verlag
Inotevera Iyo app ine shiri: Europe kuwedzera kweWingbeat inowanikwa digitally
Biomutant: Kuburitswa kunowanikwa - zvirinani zveXbox One, PS4 uye PC
Jurassic World Evolution 2: DLC Itsva yakafuridzirwa neNetflix akatevedzana
Inotevera-gen inonyaradza panjodzi: Iris uye hondo yepfungwa